साढे तीन वर्षमा कोल्टे फेरेको राजनीति - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सङघीय संसदबाट आइतबारको बैठकबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि ।
तत्कालीन चुनावपछि देउवाको अनुमान फेल खायो । काँग्रेसले अप्रत्याशित हार ब्यहोर्यो । जनताले बाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ करिब बहुमत दिए । एमाले–माओवादी सरकार बन्यो । उनीहरूले एकता पनि गरे । तर, राजनीतिक सोचेझैँ रैनछ । साढे तीन वर्षपछि अवस्था ठिक उल्टिएको छ । सत्तामा भएकाहरू सडक(प्रतिपक्षीलाई सडकको दल मानिन्छ)मा र सडकमा भएकाहरू सत्तामा पुगेका छन् ।
गत निर्वाचनमा देश बाममय बनेको थियो । दुवै (एमाले–माओवादी) एक अर्काको प्रशंसा गर्दैमा मख्ख पर्थे । मिठा मिठा नारा बाँडे । आश्वासन दिए । कम्युनिस्टको भुलभुलैयामा जनता पनि परे । तर, एउटा जहाजका दुई पाइलटले जनमतको कदर गर्न सकेनन् । एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउन नेकपा हुँदै अन्तरसंघर्ष गरे । पार्टी विभाजन भयो । त्यसपछि एमालेमा अन्तर कलह सुरु भयो । ओली सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भए । दुई पटक त प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरे । अन्तिमसम्म सत्तामा रहन उनलाई राष्ट्रपतिले पनि भरपुर सहयोग गरिन् । तर, सोधेझैँ भएन । अन्ततः ओलीले सत्ता त गुमाए गुमाए । आफ्नो हुँदा खादाको पार्टी पनि विभाजनको सँघारमा छ । नेपाली जनजिब्रोमा एउटा उखान छ, ‘भुईँको टिप्न खोज्दा गोजीको खस्यो’ ! ओलीसँग पनि अहिले न सत्ता रह्यो न सिङ्गो एमाले !
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, साउन ४ २०७८ १८:४९:५५